Isa Steam paUbuntu 18.04 uye unakirwe neiyi yemitambo chikuva | Linux Vakapindwa muropa
Isa Steam paUbuntu 18.04 uye unakirwe iyi yemitambo chikuva
chiutsi ipuratifomu yevatambi vakawanda yakagadzirwa neValve Corporation. Iyo inoshandiswa kugovera mitambo uye inoenderana midhiya online. Steam inopa mushandisi ne otomatiki software yekuisa uye manejimendi pane akawanda makomputa, nharaunda maficha senge shamwari uye rondedzero yeboka, uye mu-mutambo izwi uye mashandiro ekuita
chiutsi yave imwe yemhando huru dzekushandisa kweLinux, zvekuti yakatove nekuparadzirwa kwayo kweLinux.
Valve kuburikidza neSteam zvaita kuti musika wemitambo uwedzere miganho yawo, uchisiya parinoperera vashandisi veLinux kana zvasvika pakunakidzwa nemazita emitambo, pamusoro pekuti mitambo yakawanda iriko yeLinux iripo nekuda kweSteam.
Nekuda kweizvi isu ikozvino tine hombe katarogu yemitambo kwatinogona kuwana emahara akadai saDota2, tuxkart kungotaura zvimwe zvezvinyanyo kuzivikanwa, pamwe nemazita makuru atinogona kuwana pamitengo inonzwisisika kusiyana nemafomu epanyama
Uye kwete izvo chete Steam zvakare inowanzopa madhiri makuru, kukwidziridzwa uye kudzikisira Izvo zvaunogona kuramba uchitarisa nemazita ako aunofarira nekungowedzera kune yako yekuda runyorwa uye Steam inokuzivisa iwe neemail kana notisi kune yako foni kana iwe uine iyo application yakaiswa kana mutambo pane yako runyorwa une kusimudzira.
1 System zvinoda
2 Maitiro ekuisa Steam pane Ubuntu 18.04?
Kunyangwe chikamu ichi chichiita senge chakawedzeredzwa kumhanyisa mitambo yeStam, ivo vanofanirwa kuve neaviri-eprosesa processor inomhanya ingangoita 2,8 GHz, mukuwedzera kuve ne2 GB kana yakawanda ye RAM. Iwe zvakare uchazoda nVidia GeForce 8500 / 9600GT kana ATI / AMD Radeon HD 2500/3600 kana zvirinani mifananidzo uye yavo yazvino madhiraivha.
Izvo zvinofanirwa kutariswa kuti izvo zvishoma zvinodikanwa zvekushanda kweUbuntu 18.04 zviri kutorwa sehwaro uye kuwedzera kune izvi, zvinodiwa zvinowedzerwa kuti ugone kuve neruzivo rwekutamba pasina lags kana mashoma mafirimu.
Kunyangwe, kana iwe uchikwanisa kutamba nezvishoma pane izvo zviri pachena pano, timu yako ichave ichishanda nesimba.
Maitiro ekuisa Steam pane Ubuntu 18.04?
Kuti tiise Steam pane yedu system isu tine nzira mbiri dzekuzviita, zvese zviri nyore.
Wokutanga wavo iri kutitsigira neUbuntu software Center kwatinowana iko kunyorera kugadzirira kuisa nekungobaya mashoma.
Iyo yechipiri nzira ndeye kushandisa iyo dhiza package iyo iyo Valve inotipa isu zvakananga kubva kune yepamutemo Steam peji.
Isu tinongofanirwa kuenda kune yayo yepamutemo webhusaiti uye mune yako kurodha chikamu tinogona kuwana iyo pasuru package.
Kana kurodha pasi kwapera, tinogona kuisa Steam neiyo ichangobva kuwanikwa faira isu tinongofanirwa kushandisa edu atinofarira package package kana isu tinogona kushandisa iyo terminal yacho.
Isu tinovhura iyo terminal neCtrl + Alt + T, tinozviisa isu mune dhairekitori iro dhagi package iri uye isu tevedzera:
Uye neizvozvo tichava neSteam yakaiswa pakombuta yedu. Mushure meizvozvo isu tinogona kutsvaga kunyorera mune yedu yekushandisa menyu uye kumhanyisa chirongwa.
Ndakamhanya Steam pane yangu Ubuntu kuisirwa uye pane mumwe muchina une Kubuntu iyo me yakapa nguva yekumhanya libGL kukanganisa: isingakwanise kurodha mutyairi: r600_dri.so.Kana izvo zvakafanana zvikaitika kwavari, izvi zvinogona kugadziriswa nemurairo uyu:
Iyo nguva yatino mhanyisa kunyorera maitiro ekurodha pasi mamwe mafaera anotanga, izvi zvinogona kutora maminetsi mashoma sezvo zvichinyanya kutsamira pane yako internet kubatana.
Mushure meichi chiitiko iwe unozokwanisa kupinda neako Steam account kukwanisa kurodha mitambo yako yaunofarira kubva kuraibhurari yako iyo ichagara ichiwanikwa. Pasina imwezve ado, zvinongosara kutanga kunakidzwa nemazita ako mune yako nyowani Ubuntu kuisirwa.
Isu takagovanawo Tutorials dzakasiyana siyana Zvekuti sei kunatsiridza yako Steam chiitiko mune yako system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Isa Steam paUbuntu 18.04 uye unakirwe iyi yemitambo chikuva
Kunze kwekuda kuziva, ndeipi desktop nharaunda (Kubatana, KDE, nezvimwewo) inoshanda zvakanyanya mumitambo kana hapana kana musiyano pakati pavo?
Iko hakuna mutsauko, chete kuti iwe unofanirwa kufunga kuti kuurayiwa kweizvi kwakazvimiririra nharaunda yako, chinhu chete chinogona kukanganisa ndechekuti iwe unogovana zviwanikwa zvakaonda kuita izvi, semuenzaniso kuzviisa pamberi, kuisa sezvazviri pamusoro zvakajairwa.
Ndatenda nemhinduro. Parizvino ndine zviwanikwa zvekutamba pa1080p, kana pasina musiyano wakawanda mukuita ini ndichagara neyakanakisa pane zvandinofarira. Ndiri kushandisa Linux Mint Cinnamon, ndinoifarira nekuda kwechitarisiko chakareruka asi chakashongedzwa, ndinoziva kuti izvi zvinowira mukuravira kwemunhu, asi vamwe vakaita seKDE ndinovaona vakaremerwa uye vese Xfce neLxde vakaneta. Bvunza nezvematambudziko andinopihwa naCinnamon nemimwe mitambo yakaita saTrine, kunyangwe ndingave ndichizvipa mhosva yechimwe chinhu chingave chisiri chinhu kubva kudesktop asi kubva kudistro, Trine, semuenzaniso, haina kundipa matambudziko pandakaisa Ubuntu Mate kwekanguva kuti browse izvozvo. Ndati thanks nekupindura, kwaziso.
Iwe wakangoponesa hupenyu hwangu, steam yakanga isiri kundishandira neimwe nzira kudzamara ndamhanya kodhi yako,
Ndinokutendai zvikuru: D
Kwaziso kubva kuEcuador Rakanaka Blog.
Paul Espinagosa akadaro
Zvinondipa mhosva ye
kukanganisa: kugadzirisa dura remhepo * .deb (-install): haigone kuwana zvinyorwa: Hapana auch faira kana dhairekitori Zvikanganiso zvakasangana panguva yekugadzirisa:
steam * .deb
Ngatione kana iwe uchigona kundibatsira uye chikamu cheizvozvo, ndatenda zvikuru!
Pindura Pablo Espinagosa
zvakafanana zvinoitika kwandiri
Pindura kuna uwuwuuwuwu
Iwo mamwe manakiro eUbuntu aripo izvozvi